Owase-Peaceville nama-music video amabili | News24
Owase-Peaceville nama-music video amabili
Umculi we-Hip hop uMazwi Mchunu.ISITHOMBE:da brianphotography
UMCULI we-Hip hop osemncane wasendaweni yasePeaceville, uMazwi Mchunu, uthi uyafisa ukuthi ngelinye ilanga naye agcine esenesitebele sakhe somculo lapho ezoqopha umculo wakhe.
UMchunu (23) nowaziwa ngo “King Sjwemza” uzokhipha ama-music video ezingoma zakhe ezimbili ngaphambi kokuba kuphele inyanga kaNtulikazi (July). Eyokuqala esihloko sithi uZero ishuthelwe endaweni yasePeaceville kanye nethi Bars For Days.
Ekhuluma ne-Echo uthe ujabule kakhulu ikakhukazi ngoba usebenzise umphakathi wasendaweni lapho ehlala khona. UMchunu uthe waqala ukuqopha izingoma ngonyaka wezi-2010 ngemuva kokuzibona ukuthi unethalente lokubhala.
“Ukubhala izingoma bekungenye indlela ebengikwazi ngayo ukudlulisa indlela engizizwa ngayo ngeleso sikhathi. Ngaphambi kokuba ngihlale endaweni yase-Peaceville bengihlala eSlangspruite kanti bengihlumezeka kakhulu. Ngoba bengiyingane futhi nginguwumuntu ongathandi ukukhuluma bengivele ngizivalele bese ngibhale yonke into engiyizwayo ngaleso sikhathi. Bengibhala izingoma ngibhala nezinkondlo ngesikhathi ngiqala.
“Ngemuva kwesikhathi ngabe sengiyabona ukuthi engathi nginethalente ngabe sengikhetha ukuyoqopha. Seloku ngaqala umculo sengiyawuthanda kakhulu kanti futhi iwona nje engiwenzayo njengamanje,” kubeka yena.
Uthe isifiso sakhe ukuthi azibone ekhula endimeni yezomculo angagcini nje ngokuba umculi kuphela, kodwa agcine esenesitebele sakhe naye.
UMchunu kumanje usemncintiswaneni womsakazo i-5FM obizwa ngokuthi i “The Rap Factor” noba khona njalo ngeSonto kusuka ngehora lesikhombisa ntambama kuya kwihora leshumi ebusuku. Abaculi be-Hip hop kuyaye kudingeke ukuba baqhudelane ngomculo wabo bese abalaleli bevotela lowo abamuthandayo noma abacabanga ukuthi uyena ofanelwe ukubalwa. Seloku angena kulo mncintiswano mhlaka-2 kuNhlangulana akakaze ahlulwe kanti nangeSonto uphinde waphumelela futhi uMchunu.
“Ngiyathemba ukuthi ngisazoqhubeka ngihlale isikhathi eside kulo mncintiswano ngoba uyangisiza kakhulu. Uyakhulisa umculo wami kanti futhi nabantu abaningi sebeqala ukunginaka kanye nomculo wami,” kuphetha yena.